विश्वमै पहिलो कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘भ्याक्सीन’ तयार, कहिले आउँछ बजारमा ? « Lokpath
काठमाडौं । सारा विश्वमा तीव्र गतिले फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रकोपका बीच सबैलाई अचम्मित बनाउँदै रुसको गमलेई इन्स्टीट्यूट अफ एमिडेमियोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजीले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सीन बनाएको दाबी गरेको छ ।
उक्त खबरले सारा विश्वबासीलाई राहत मिलेको छ । उक्त भ्याक्सीनको सबै ट्रायल परीक्षण सफल भएको छ । इन्स्ट्यूट फर ट्रान्सलेशनल मेडिसिन एण्ड बायोटेक्नोलोजीका डाइरेक्टर भदिम तरासोभले यो कुराको पुष्टि गरेका हुन् ।
रिपोर्टका अनुसार रुसको सेचेनोभ मेडिकल यूनिभर्सिटीद्वारा यो भ्याक्सीनको ट्रायल गरिएको हो । १८ जुनमा पहिलो चरणमा १८ भ्यालेन्टियर्सको समूहमा यसको ट्रायल भएको थियो । त्यसपछि २३ जूनमा भ्याक्सीन टेस्टको दोश्रो चरण शुर भएको थियो । दोश्रो चरणमा २० जनाको समूहमा भ्याक्सीनेट गरिएको थियो ।
अमेरिका, बेलायत र चीनलाई पछार्यो
चीन, अमेरिका र बेलायतलाई पनि पछि पार्दै रुसले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सीन बनाएको छ । स्पुटनिकका अनुसार रुसको गमलेई इन्स्टीट्यूट अफ एमिडेमियोलोजीले यस भ्इाक्सीन तयार पारेको हो ।
यो औषधि मानव शरीरमा गरिएको सबै ट्रायलमा सफल भएको दाबी गरिएको छ । रिसर्चरका अनुसार सबै स्टेजमा भ्याक्सीनको ट्रायल सफल भएको छ ।
सानो समूहमा हुन्छ परीक्षण
विशेषज्ञका अनुसार कुनै पनि भ्याक्सीनको पहिलो चरणमा मानिसमा सानो समूहमा त्यसको सेफ्टीको परीक्षण गरिन्छ । यो फरक फरक समयमा फरक फरक समूहमा हुन्छ । तर यो औषधि सबै रुपमा सफल छ ।
यसको पुष्टिका लागि कहिले १० देखि १५ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले औषधिको ट्रायल वर्षौंसम्म पनि हुन सक्दछ । अमेरिकाको हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्भिस डिपार्टमेण्टका अनुसार मानिसमा यो औषधि परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा २० देखि ८० जना मानिसमा भ्याक्सीन टेस्ट गरिन्छ ।
कहिले पाइन्छ भ्याक्सीन ?
यूनिभर्सिटीको इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल प्यारासाइटोलोजीका डाइरेक्टर अलेक्जेन्डर लुकाशेवका अनुसार भ्याक्सीन डेभलपमेण्टको प्लान शुरु भएको छ ।
रेगुलेटरी अप्रुभल पछि औषधिको प्रोडक्शन शुरु हुनेछ । सबै सफल भयो भने दुई देखि तीन महिनामा भ्याक्सीनको प्रोडक्शन शुरु हुन सक्छ । तर रुसी ट्रायलमा केहि प्रकारका प्रश्न उठेका छन् ।
जसलाई निालेर यसको अप्रुभलमा ढिलाई हुन स्क्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७७,असार,२९,सोमवार २१:०६